"ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၂:၂၅၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ
၉၅ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၈ နှစ်
၁၂:၁၆၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၂:၂၅၊ ၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
== ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) (ခ) ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို ==
- [] ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အဖ ဦးချစ်ဦး၊ အမိ ဒေါ်မြရင်တို့က မွေးဖွားသည်။
- ၁၉၇၁၊[]၊ ဗုဒ္ဓ ဓမ္မ လောက စာစောင်မှ တဆင့် စာပေနယ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့။
- ၁၉၇၁-၇၅၊ စီပွားရေး တက္ကသိုလ်တွင်[[ရန်ကုန်စီပွားရေးတက္ကသိုလ်]]တွင် တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ စီးပွားရေးပညာ B.Econ. (P.D.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့။
- ၁၉၇၈၊[]၊ [[ရန်ကုန်တိုင်း]] [[အမှတ် (၂)ဒေသကောလိပ်]] ဒေသကောလိပ်တွင်တွင် နည်းပြဆရာ အဖြစ် စတင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့၊ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်၊စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ [[ဒဂုံတက္ကသိုလ်]] တို့တွင် သင်ကြားပို့ချခဲ့ပြီး၊ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ဘောဂဗေဒဌာနတွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ ကထိကအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့။
- ၁၉၈၉၊[]၊ ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့၊ ၁၉၉၃ ဒီဇင်ဘာတွင် သမီးငယ် မစုနွယ်ကို မွေးဖွားခဲ့။
- ၁၉၉၁၊[]၊ ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်မှ မဟာဒဿန (ဘောဂဗေဒ) M.Phil. (Eco) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့။
- ၁၉၉၅၊[]၊ စင်ကာပူ ဖွံ့ဖြိုးမှု အတွေ့အကြုံ (နေမျိုးထွန်းနှင့် တွဲဖက်၍) ဗုဒ္ဓအလိုကျ လုပ်ငန်းခါင်၊ စီးပွားရေးမျက်စိ စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့။
- ၁၉၉၆၊[]၊ လူမှု ဆက်ဆံရေး နည်းဗျူဟာ စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့။
- ၁၉၉၇၊[]၊ အောင်မြင်သော လုပ်ငန်းရှင်နှင့် အိမ်တော်၌၊ ကွန်ဖြူးရှပ်၏ စီးပွားရေး ပြဿနာ ၁၀ဝ အဖြေရှာ၊ သင့်ကိုယ်ထဲက ခေါင်းဆောင်၊ လူတိုင်းတွက်တွာ ခေါင်းဆောင်မှု ပညာ စာအုပ် ထုတ်ဝေခဲ့။
- ၁၉၉၉၊[]၊ သင့်ဖောက်သည်ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံမလဲ၊ ဖြေရဲရင် မေးကြည့်၊ ဂျာနယ်ကြိုက် စီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွား၊ မြန်မာ့စီးပွား စာအုပ်တို့ကို ထုတ်ဝေခဲ့။
- [[၂၀၀ဝ]] မှ [] အထိ Khitlunge.net.mm တို့တွင် အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့။
- [] မှ [] ခုနှစ်ထိ ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၌ [[ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး]] (Deputy Director) အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့။
- ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ကလောင်အမည်ဖြင့် စီးပွားရေးစီးပွားရေးပညာ၊ ပညာ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာနှင့် ပတ်သက်သော စာအုပ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းနှင့် စာစောင်များတွင် ရေးသားလျက် ရှိ။
- ကမ္ဘာ့[[ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး စီးပွားရေး ဂျာနယ်တွင်ဂျာနယ်]]တွင် [[အယ်ဒီတာချုပ်]] အဖြစ် တာဝန်ယူလျက်ရှိ။
<ref>Living Color ကြော်ငြာနှင့် ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် စီးပွားရေးသတင်း မဂ္ဂဇင်း၊ No. 163, February, 2009 နဲ့ စာပေလောက စာအုပ်တိုက်မှ စာအုပ်အမှတ် (၂၉၂) အဖြစ် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ) ရေးသားတဲ့ 'နိယာမ ဗဟိုပြု ခေါင်းဆောင်' စာအုပ်တို့မှ
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/118528" မှ ရယူရန်